ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-Q series explosion proof quarter turn electric actuator is specially designed for quarter turn operating applications such as ball, butterfly, plug valves and similar usages.Drived by 380V/220V/110VAC or 24V/110VDC power, inputs 4-20mA or 0-10VDC control signal, moves valve to the right position, and achieves to automatic control, the maximum output torque of AOX-Q series explosion proof quarter turn electric actuator is 6000Nm.Based on technical theory and rich experience, AOX company's unique technical know-how is the basic driving force for all product development and scientific production. AOX company is growing intoaleading company in valve automation industry with advanced technology.
6000Nm မှ 50Nm ထံမှ 1. အမျိုးမျိုးသော output ကို torque ။
2. ရှဲလ်: Hard လူမီနီယမ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင် coated ပြင်ပ epoxy အမှုန့် anodized ။
3. Worm ဂီယာ: Precision machine နှစ်ဆတီကောင်ဂီယာနိမ့်ဆူညံသံမြင့်မား output ကို torque ။
AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားလေးပုံတပုံများအတွက် 4. ဖြုတ် drive ကိုဘုရ်ှလျှပ်စစ် actuator turn
Ltd. , Zhejiang Aoxiang Automation နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက် (ယခင် Rui'an Changhong Automation စာရွက်စာတမ်း Co. , Ltd အဖြစ်လူသိများ) နောကျပိုငျးဧပြီလ 7, 1997 ရက်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောကြောင့်ကြောင့်မှ Zhejiang Aoxiang Automation နည်းပညာ Co. , Ltd မှပြောင်းလဲခဲ့သည် အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းလျှောက်လွှာများ၏မှတ်ပုံတင်မြို့တော်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမှတ် 2608, ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်း, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်, Ruian စီးတီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ 16.200 စတုရန်းမီတာတစ်ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာနှင့်အတူ, 12.300 စတုရန်းမီတာဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဧရိယာ 12.600 စတုရန်းမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာ 20 ကီလိုမီတာကွာ Wenzhou လေဆိပ်နှင့် Wenzhou မီးရထားဘူတာကနေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယာဉ်အသွားအလာအဆင်ပြေပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနီးပါးနှစ်ပေါင်း 20 လျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးပြုနေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း, ဒီဇိုင်း, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်း, ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် training.The နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုပေါင်းစပ်ထက်ပို 60000 ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ရေနံနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အသေးလေးပုံတပုံကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ရေကုသမှု, သင်္ဘော, စက္ကူ, ပါဝါဘူတာ, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အခြား fields.If လျှပ်စစ်လျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်, [email protected] ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 60,000 လျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။ အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာ, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက်, ပလာစမာရေမှုန်ရေမွှားဂဟေဆော်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့လိုင်းနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ, ကြိတ်, ငြီးငွေ့စရာ, တူးဖော်ခြင်း, ပစ်ကြိတ်ခြင်းနှင့်စက်ကိရိယာသည်အခြားအမျိုးအစားများပါဝင်သည် ပစ္စည်းကိရိယာ၏ 300 ကျော်အစုံ, ပစ္စည်းကိရိယာများလူသိများတဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ, မြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားအပြောင်းအလဲနဲ့တိကျမှန်ကန်မှုထံမှဝယ်ယူနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။3တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။2utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်သည်။
ဖြေကျနော်တို့သေးငယ်တဲ့လေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့တစ်နှစ်အာမခံကိုဆက်ကပ်။
A: လျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သေးငယ်တဲ့လေးပုံတပုံ၏နမူနာအမိန့်ချင်လျှင်, နမူနာအဆိုပါနမူနာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိုကဲ့သို့သော DHL, UPS, TNT, FedEx နှင့်အတွင်းရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ဖော်ပြ va လှေတျတျောမူပါလိမ့်မည် 3-5 ရက်အတွင်းဖြန့်ဝေဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် 3-5 ရက်အတွင်း
hot Tags:: ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်